यस्तो छ हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको होन्डाको न्यू अमेज, कति पर्छ मूल्य ? - ramechhapkhabar.com
यस्तो छ हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको होन्डाको न्यू अमेज, कति पर्छ मूल्य ?
नेपाली बजारमा केही दिनअघिमात्र होन्डाले नयाँ अमेज सार्वजनिक गरेको छ । स्याकार ट्रडिङ् कम्पनीले हालै अमेजको नयाँ कम्प्याक्ट सेडान म्यानुअलमा दुई र सिभिटीमा दुई गरी कुल चार वटा भेरियन्ट नेपाल भित्र्याएको छ ।
अटोमेटीक हेड ल्याम्प, सि आकारको एलइडी लाइटको समिश्रण र स्लीक फ्रन्ट ग्रिलले अमेजलाई फ्रेस देखाएको छ । एड्भान्स एलईडी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प र त्यसैमा एकीकृत रहेको एलईडी डीआरएलका साथै नयाँ एड्भान्स फ्रन्ट फगल्याम्प र डायमण्ड कट टु टोन मल्टीस्पोक आर–१५ अलोय ह्विलले यो कारको लुक्समा नयाँपन दिएको छ ।
त्यसैगरी, यो नयाँ कारमा गाइडलाइन सहितको रियर मल्टीभ्यु क्यामेरा रहेको छ । यो कारले सुरक्षाका लागि एनक्यापबाट ४ स्टार सेफ्टी रेटिङ समेत प्राप्त गरेको छ । अमेजमा रहेको स्लिक सोलिड विङ्ग फेस फ्रन्ट ग्रिलले यसको डिजाइनलाई अझ आकर्षित गरेको छ ।
गाडीको टप स्पिड १६५ किलो मिटर प्रति घण्टा रहेको छ भने प्रति लिटर १८ किलोमिटर माइलेज यो गाडीले दिने छ । १७० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स, सेफ्टीका लागी एबीएस, इबिडि, ड्युल एयर ब्याग लगायत विभिन्न फिचर यो गाडीमा रहेको छ । यो गाडीमा ११ सय ९९ सीसी क्षमताको इन्जिन रहेको छ । जसमा १।२ लिटर आई–भिटीइसी पेट्रोल र १।५ लिटर आई–डिटीइसी डिजेल इन्जिन रहेकोछ । पेट्रोल इन्जिनले अधिकतम ९० पीएस पावर र डिजेल इन्जिनले १०० पीएस पावर प्रदान गर्छ ।
सबैभन्दा सस्तो एस म्यानुअलको मूल्य ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ कम्पनीले निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, अर्को एस सिभिटीको मूल्य ४५ लाख २ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैगरी, भिएक्स म्यानुअलको मोडलको भने ४५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सेग्मेन्टकै सबैभन्दा महंगो भिएक्स सिभिटीको मुल्य ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।